साथी कुरो त गज्जब हो । पुरानो कुरोबाट पाठ सिक्ने कुनै नेता-पार्टी भए पो । जुन जोगी आए नि कानै चिरेको भने झैं पो भो त नेपालाँ । समय मै माओवादी-खाओवादी सप्पैको बुद्धी पलाओस, शुभकामना !!!
मैले चाँहि माओबादीहरुलाई केही मौहलत दिएकोछु। हेरूँ, एक दुई बर्षमा केही गरिहाल्छन् कि, सुध्रिन्छन कि।
तपाइको प्रथम अनुक्षेदले नै संपूर्ण लेखको ब्याख्या गरेको महशुस भयो। अर्को शब्दमा नेपालीहरुले भोग्नुपरेको राजनैतीक नियत त्यही अनुक्षेदले प्रष्टाउंछ।
अब तपाइले ब्याख्या गरेअनुरुप माओबादीको गतिविधीमा जाउं। अझै पनि माओबादी सत्तासिन पार्टी हो की छापामार, उनिहरुले प्रष्टाउन सकैका छैनन। अरु सरकारमा हुंदा आरोपको गोला बारी गर्नेहरु माओबादी अहिले तिनै आरोपमा आफू फसेका छन। या त यिनीहरु यो समस्यालाइ समाधान नै गर्नसक्दैनन या त कुहिरोको काग जस्तै के गर्ने के नगर्ने रुमलिरहेका छन। सबैको समय आउंछ, माओबादीको पनि आयो। माओबादीको यस्तै चर्तीकला कायम रहे उनिहरु तपाइले भने जस्तै प्वांख पलाएका कमिला साबित हुने छन। अनि आफै उडेर जानेछन या जनताले नै उडाउने छन, त्यती बेला उनिहरुका बन्दुकले पनि उनिहरुला साथ दिनेछैन।
कुरा गर्‍यो कुरैको दु:ख !
मेरो बिचारमा त हामिले माओबादीलाई मात्रै हैन भएभरका दल र नेता सबैलाई चाहिने भन्दा बढि समय पहिले नै दिईसकेका छौं ।
अब प्वाँख उम्रने बारेमा चाही मलाई लाग्छ यीनिहरु सबैको पुरानै प्वाँख हुन। मौका नपाएसम्म प्वाँख लुकाउन भने सबै माहिर छन। त्यसैले यीनका प्वाँख पहिला देखीदैंन ।